ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို စွဲမြဲစွာ ရွတ်ဖတ်ကြပါ။ အကြင်အရှင်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ အသက်ဝိညာဉ်ရှိပြီး ထိုအရှင်မြတ်အား တိုင်တည်၍ပြောမည် ကြိုးပြေ၍ ထွက်ပြေးသွားသည့် ကုလားအုတ်ထက် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ မေ့လျော့သွားတတ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: အသင်တို့သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို စွဲမြဲစွာ ရွတ်ဖတ်ကြပါ။ အကြင်အရှင်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ အသက်ဝိညာဉ်ရှိပြီး ထိုအရှင်မြတ်အား တိုင်တည်၍ပြောမည် ကြိုးပြေ၍ ထွက်ပြေးသွားသည့် ကုလားအုတ်ထက် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ မေ့လျော့သွားတတ်သည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ၎င်း၏ ပညာရပ်များ။
အမျိုးအစား: ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ၎င်း၏ ပညာရပ်များ။ . ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အလေးအမြတ်ထားခြင်း၏ ထွတ်မြတ်မှု။ .
+ - သရလက္ခဏာနှင့်ဖော်ပြခြင်း
عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تعاهدوا هَذَا القُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإبلِ فِي عُقُلِهَا». .
[صحيح] - [متفق عليه]
အဗူမူစာ အရှ်အရီ (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အသင်တို့သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို စွဲမြဲစွာ ရွတ်ဖတ်ကြပါ။ အကြင်အရှင်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ အသက်ဝိညာဉ်ရှိပြီး ထိုအရှင်မြတ်အား တိုင်တည်၍ပြောမည် ကြိုးပြေ၍ ထွက်ပြေးသွားသည့် ကုလားအုတ်ထက် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ မေ့လျော့သွားတတ်သည်။
ဤဟဒီးဆ်သည် ဆွဟီးဟ် အဆင့်ရှိသည်။ - ဗုခါရီကျမ်းနှင့် မွတ်စ်လင်မ်ကျမ်း။
“ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို စွဲမြဲစွာ ရွတ်ဖတ်ကြပါ။” ဟူသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား အမြဲတစေ ပုံမှန်ရွတ်ဖတ်ကြပါဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ မိန့်ကြားချက်ဖြစ်သည့် “အကြင်အရှင်၏ လက်တော်တွင် မုဟမ္မဒ်၏ အသက်ဝိညာဉ်ရှိပြီး ထိုအရှင်မြတ်အား တိုင်တည်၍ပြောမည် ကြိုးပြေ၍ ထွက်ပြေးသွားသည့် ကုလားအုတ်ထက် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ မေ့လျော့သွားတတ်သည်။”ဟူသောမိန့်ကြားချက်တွင် ပါရှိသည့် (အုကုလ်)ဟူသည့်စကားလုံးသည် (အိကာလ်) ၏ ဗဟုဝုစ်ကိန်းဖြစ်ပြီး ကုလားအုတ်အား ၎င်း၏အရှေ့ခြေဒူခေါင်းနားတွင် ချည်နှောင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ကြိုးကို ခေါ်ဆိုသည်။ နှလုံးသားထဲတွင် အလွတ်ကျက်မှတ်ထားသော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ချည်တိုင်တွင် ကြိုးချည်ထားသော်လည်း ထွက်ပြေးသွားသည့် ကုလားအုတ်နှင့်တူကြောင်း ပမာပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိ၏စွမ်းအားဖြင့် ၎င်း (ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို အလွတ်ကျက်မှတ်ထားသူ)တို့အား ထိုကြီးကျယ်လှသည့် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမြှင့်ထားတော်မူသဖြင့် ၎င်းတို့သည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား အမြဲကျက်မှတ်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကုရ်အာန်အား မမေ့လျော့စေရန်အတွက် အပိုင်းလိုက်သတ်မှတ်ကာ နေ့စဥ်ပုံမှန်ရွတ်ဖတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်တတ်သည့်သဘောမျိုးဖြင့် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အားမေ့လျော့သူသည် ဆိုးကျိုးမရှိသော်လည်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား အလွတ်ကျက်မှတ်နိုင်စွမ်း ချီးမြှင့်ထားပြီးနောက်အလေးမထားဘဲ လျစ်လျူရှုထားခြင်းကြောင့် မေ့သွားသူသည် အပြစ်ပေးခံရမည်ကို စိုးရိမ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား ရင်ထဲတွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက် အမြဲဂရုတစိုက် ရွတ်ဖတ်နေသင့်သည်။ထို့အတူ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အတိုင်း လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရန်လည်း လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်စုံတစ်ရာကို လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ထိုအရာအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးပြီး အမြဲကျန်ရှိနေစေမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဆင်ဟာလီ ဝီဂါ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား အမြဲဖတ်ရွန်ရန်နှင့် အမြဲကျက်မှတ်နေရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားသည်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကို အာဂုံဆောင်ထားသူသည် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား အမြဲတစေ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဖတ်ရွတ်နေလျှင် ကျက်မှတ်ထားသမျှသည် ၎င်း၏ နှလုံးသားထဲ၌ ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက မေ့လျော့သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည် ကုလားအုတ်ထက်ပင် ပို၍လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်သည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် ၎င်း၏ ပညာရပ်များ။ . ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အလေးအမြတ်ထားခြင်း၏ ထွတ်မြတ်မှု။ .
သင်တို့အနက် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်အား သင်ယူပြီးနောက် သင်ကြားပေးသူသည် အမွန်မြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းတော်မှ အက္ခရာတစ်လုံးကို ရွတ်ဖတ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသူသည် ကောင်းမှုတစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမှုတစ်ခုသည် ကောင်းမှုဆယ်ခုနှင့်ညီမျှသည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
အသုံးအနှုံးနှင့် နည်းလမ်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း
အကြံပြုလိုသည့် ဘာသာပြန်အကြံပြုလိုသည့်စာသား (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဆင်ဟာလီ +ဝီဂါ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း
တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ဟဒီးဆ်တော်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဘာသာပြန်စွယ်စုံကျမ်း ပရောဂျက်:
အစ္စလာမ့် ကဏ္ဍအသီးသီး၌ အကြိမ်ကြိမ်လာရှိသော တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်တော်များကို ရွေးချယ်ထုတ်ယူ၍ ထိုဟဒီးဆ်တော်များကို ရိုးရှင်းပြည့်စုံစွာဖြင့် ရှင်းပြထားပြီး ၎င်းတို့ကို တိကျသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော ဘာသာစကားများသို့ အရည်အသွေးမြင့် ဘာသာပြန်ဆိုကာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အခမဲ့ဖြန့်ချိနေသည့် ပရောဂျက်ဖြစ်သည်။.
တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ဟဒီးဆ်တော်များ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအတွက် ခေတ်မီ၊ စိတ်ချရပြီး အခမဲ့ဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်တရပ်ကို တည်ထောင်ရန်။.
ဘာသာပြန်ဆိုသူများ ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် ဟဒီးဆ်ဘာသာပြန် အီလက်ထရွန်းနစ်မှတ်ဉာဏ် အချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးရန်။.
ဘာသာပြန်များကို ရည်ရွယ်ထားသည့် ပရိတ်သတ်ဆီသို့ ရနိုင်သမျှ နည်းလမ်းများဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးရန်။.
စွယ်စုံကျမ်းကို ဘာသာစကားအသီးသီးသို့ ပြန်ဆိုခြင်း။.
စွယ်စုံကျမ်းကို အွန်လိုင်းတွင် ဖြန့်ချိခြင်း။.
စွယ်စုံကျမ်းနှင့် ၎င်း၏ဘာသာပြန်များ စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိခြင်း။.
العربية English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी Tiếng Việt සිංහල ئۇيغۇرچە كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ဗမာ ไทย
موسوعة القرآن الكريم - موسوعة المصطلحات الإسلامية
HadeethEnc.com © 2022